Krizy nentin-dRajoelina : Tanora 500 000 very asa -
AccueilRaharaham-pirenenaKrizy nentin-dRajoelina : Tanora 500 000 very asa
21/02/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Niteraka fahasimbana goavana teo amin’ny firenena malagasy ny fanonganam-panjakana nataon-dRajoelina Andry tamin’ny taona 2009. Tsy ny krizy ara-politika ihany mantsy no nateraky ny fikatsahana tombontsoa manokana nation-dRajoelina fa nitondra faisana koa ny ara-tsosialy sy ara-toekarenan’i Madagasikara. Nanomboka ny janoary 2009, izay nisian’ny fanonganam-panjakana teto amin’ny firenena, maro be tsy tambo isaina ny tsy an’asa teto amin’ny firenena. Maro ireo orinasa rava, potika sy may tamin’ireny fotoana ireny, ary antony lehibe nahatonga ireo mpiasa very asa aman’hetsiny. Raha ny tatitra navoakan’ny Pnud sy BIT (Bureau international de travail) tamin’ny 2011 dia olona 336 000 no very asa tao anatin’ny roa taona, izay nampidina ho 11 isan-jato ny vola miditra isam-batan’olona teo anelanelan’ny taona 2008 hatramin’ny 2010. Tsy nijanona teo fa nitohy hatrany io isa io, noho ny anton’ny fahantrana namely ny vahoaka sy ireo mpianatra nahavita fianarana.
Nanampy isa ihany koa ireo tantsaha nandao ny ambanivohitra misy azy noho ny asan-dahalo sy ny tsy fandriam-pahalemana nahazo vahana nanomboka ny andron’ny Tetezamita iny. Izay tsy nisy voavahan’ny fitondrana Tetezamitan-dRajoelina avokoa, nefa dradradradraina ery tamin’izany fotoana izany ny hoe “ny tombontsoam-bahoaka no ambony” ka hampidinina avokoa ny vidin’entana, anisan’izany ny vary mora, menaka mora sy ny tsena mora sy ny sisa. Raha ny tatitra navoakan’ny banky iraisam-pirenena ny taona 2010, dia olona 500 000 any ho any no very asa. Tsara marihina fa asa mivantana io resahina io. Teo amin’ny orinasa afaka haba izao dia fantatra fa miisa 32 ireo nikatona tamin’ny 2009, ka olona 5 alina no very asa tamin’ny AGOA. Ny fahaverezan’ny asa izay niteraka olana ara-tsosialy goavana be atrehin’ny isam-pianakaviana mandrake ankehitriny, toa ny ray lasa mivarilavo, reny lasa mpivaro-tena, ny ankizy tsy afaka mianatra intsony ka zary lasa mitombo ireo zaza tsy ampy taona miroso amin’ny asa sy mivaro-tena ihany koa.
Manginy fotsiny ny mpivarotra amoron-dalana izay nitombo be satria tsy an’asa ny maro an’isa amin’izy ireny. Marihina fa mpiasa manana fahaiza-manao sy traikefa amin’ny sehatra ny fanamboarana akanjo ny ankamaroany. Izay olana ara-tsosialy izay, niteraka olana ara-toekarena satria lasa nitotongana ny vidim-piainana, izay ezahin’ny fitondram-panjakana ankehitriny, tarihin’ny Filoham-pirenena Rajaonarimampianina Hery arenina hatramin’izao. Na miezaka ny manadio tena i Rajoelina Andry 9 taona aty aoriana amin’ny filazana fa tsy nanao na inona na inona tamin’ireny fotoana ireny. Tsy voafafan’ny tantara ny fanimbana vokatry ny ady teo amin’ny Ravalomanana Marc sy ny filohan’ny Tetezamita Rajoelina Andry, izay niteraka ny fahaverezana asa maro tamin’izany andro izany.
Nampitotongana ny orinasa Jirama
Tompon’antoka feno tamin’ny fitotonganan’ny orinasa nasionaly mpamokatra herinatra, Jirama i Andry Rajoelina. Tsy nitsahatra nijotso, ary efa tafalatsaka anaty lavaka mangitsokitsoka mihitsy ity orinasa Jirama ity nandritra ny fitantanan’ingahy Andry Rajoelina. Hany ka nanahirana ny Fitondrana ankehitriny ny nanarina izany tsikelikely.
Araka ny tatitra, sady efa nivarotra tamin’ny fatiantoka ny orinasa no mbola natao fangalana vola ihany. Voatery nidi-trosa ny Jirama mba hampihodinana ny orinasa. Tsy vitan’izay fa nitotongana hatramin’ny tolotra nomena ny vahoaka malagasy ihany koa. Nanjakan’ny delestazy tanteraka i Madagasikara tamin’ny fotoan’andro nitondran’i Andry Rajoelina. Voatery nifanaraka tamin’ireo mpandraharahan’ny solika teto Madagasikara ka nidi-trosa tamin’izy ireo indray namatsiana sy nampihodinana ireo milina mpamokatra herinaratra. Nampiaina ny vahoaka tao anatin’ny haizina nandritra ny dimy taona ngarangidina ingahy Andry Rajoelina. Tsy nahita vahaolana naroso ho amin’ny fanatsarana ny tolotra omena ny vahoaka eo amin’ny tontolon’ny angovo sy ny herinaratra.
Efa saika nikatona mihitsy aza ny orinasa Jirama tamin’ny tsy fahafahany nihodina ara-dalàna intsony. Sempotra sy kenda ary efa saika tsy niaina intsony mihitsy.
Voaporofo izay amin’izao fotoana izao, satria mbola miady mafy amin’ny fanarenana ny orinasa Jirama ny fitondram-panjakana. Mbola manana trosa 800 tapitrisa Ar navelan’ingahy Andry Rajoelina mantsy ny Jirama ankehitriny.
Manaraka izany, tsy nahita mpamatsy vola na ny marimarina kokoa tsy nisy mpamatsy vola sahy niditra teto amintsika tamin’ireny fotoana nitondran-dRajoelina ireny ka mba nahafahana nanampy ny orinasa Jirama. Niady teny, ary niady irery tamin’ny fameloman-tena ity orinasa mpamokatra herinaratra ity tamin’izany.
Izany rehetra izany no nangatahana famelana sy nifonana tamin’ny vahoaka. Mihevitra angamba ingahy Andry Rajoelina fa sitrana sahady ny fery nampahoriany ny vahoaka sy nampandohhalihany ny firenena.
Tonga nanatrika ny fandevenana ny nofo mangatsiakan’ny rain’ny demokrasia, izay tsy iza fa ny profesora Zafy Albert ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina, tany Betsiaka ny sabotsy teo, taorian’ny iraka izay notontosaina tatsy Roma. Avy hatrany moa ...Tohiny